Soo dejisan WinX DVD Copy Pro 3.9.2 – Vessoft
WindowsCD & DVD & USB gaariCD & DVD-ga ripperWinX DVD Copy Pro
Bogga rasmiga ah: WinX DVD Copy Pro
WinX DVD Copy Pro – software ah si ay u abuuraan koobi DVD tayada image sare. software waxay bixisaa fursadaha kala duwan si ay nuqul ka DVD ah: cloning in DVD faaruq ah, dayanayaan in file of image ISO ama lagu badbaadinayo in folder ah. WinX DVD Copy Pro waa inay awoodaan inay nuqul ka DVD in file hal aan khasaare tayada iyo u ciyaaro inta badan ciyaartoyda warbaahinta sabab u ah waafaqid format badan. WinX DVD Copy Pro kuu ogolaanayaa inaad soo saaro cutubka lagama maarmaanka ah magacyada iyo audio oo dhan ama tareenka video si gooni gooni ah. software The taageertaa teknoolajiyada casriga ah si tubada DVD by code gobolka, garab encryption iyo iska indha UOP. Sidoo kale WinX DVD Copy Pro awood Buur sanamyadii ISO in drive a dalwaddii iyo gubi DVD ah.
Cloning ah DVD-, koobiyeynta ee DVD ah in image ISO ah, wax badbaadiya oo DVD ah in folder
Kobigareynta of content ee file hal socon ciyaartoyda ugu
Saarida of audio ama video si gooni gooni ah raad
Dhaaftaan oo ka mid ah nidaamyada ilaalinta nuqul
Gubasho ah DVD-
Sii kordhaya ee image ISO ay ku drive a dalwaddii
Soo dejisan WinX DVD Copy Pro
Faallo ku saabsan WinX DVD Copy Pro
WinX DVD Copy Pro Xirfadaha la xiriira
DeepBurner – aalad lagu gubo CD-yada iyo DVD-yada, abuuridda CDs maqal iyo in lagu gubo muuqaalka ISO. Software-ka ayaa la wada shaqeyn kara dhowr wadayaal isku mar.
software la set badan oo ah qalab loogu talagalay maamulka dhameystiran oo ka mid ah kombiyuutarada fog adigoo isticmaalaya shabakadaha maxalliga ah ama caalamiga ah.